M - Mogok sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ် / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မိုးကုတ်ဆ...
Tags: မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဖြစ်တော်စဉ်(ထေရုပတ္တိ) - Mogok_Biography Mogok_sayardaw Mogok_sayartaw mogokmaster mogokhead - DHAMMA TV CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Dhamma TV Channel2-...
Tags: ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw DhammaTV Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မဟာဂန္မာရု...
Tags: ပရိတ်ကြီး၊ ဓမ္မစင်္ကြာ နှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ် - payatekyee payategyi paratekyee parategyi dhammasatkyar anantalatkana ashinzanakabiwuntha ashin_zanaka janaka N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] စိတ်ဖြစ်စ...
ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) - စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်း ၁+၂
Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor ashin_nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw ashinnandamarlabiwuntha nandamalbhivansa N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ရုပ်တရားန...
ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) - ရုပ်တရားနှင့်ရုပ်၏အကြောင်းတရား ၁+၂ Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor ashin_nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw ashinnandamarlabiwuntha nandamalbhivansa N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] စိတ်ဖြူစင...
ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) - စိတ်ဖြူစင်မှုအင်အားစုများ ၁+၂
Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor ashin_nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw ashinnandamarlabiwuntha nandamalbhivansa N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] စိတ်ဖြစ်ေ...
ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) - စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုလေ့လာခြင်း ၁+၂ Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor ashin_nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw ashinnandamarlabiwuntha nandamalbhivansa N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အဘိဓမ္မာမြ...
ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) - အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနတရားတော်
Tags: ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw DhammaTV N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] စိတ်၏အာရံ...
ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) - စိတ်၏အာရုံများနှင့်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများ Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor ashin_nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw ashinnandamarlabiwuntha nandamalbhivansa N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] စိတ်ကိုအာ...
ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်) - စိတ်ကိုအာရုံနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ - doctor ashin_nandamarlarbiwuntha parchoke sayartaw sayardaw ashinnandamarlabiwuntha nandamalbhivansa Pages: 1234567 of 10